समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्ने कति यर्थाथ कति हल्ला ? -
२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:२३ 1010 पटक हेरिएको
समाजवादी पार्टी निर्माण सगैं सरकार छोड्ने विषयले आम संचार माध्यममा स्थान पायो । यो पार्टी कै नेताहरुले आफना कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधनमा उठाएर नै विषयले तुल समात्यो । यो पार्टी निर्माण भन्दा अगाडी संघीय समाजवादी फोरम,नेपालले दुई बुँदा सम्झौताका आधारमा सरकारमा सामेल भएको थियो ।यो विषय समाजवादी पार्टी निमार्णसगैं चुलिएर गएको छ । यो हल्ला वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा भएको पार्टी नेताहररु नै बताउछन ।
‘सरकार छोड्ने कुनै विषय नै भएन । हामी सरकारमा सहभागिता सत्ता भोक गर्न नभई निश्चित उदेश्य प्राप्तिकोलागि सामेल भएको हो । हाम्रो उपस्थितिले नै अहिलेको सरकारले केही भएपनि संघियतालाई आत्मासाथ गरेको छ । तपाईलाई थाहा छ नि सरकार प्रमुख कुनैपनि बेला संघियताबाट भाग्न सक्छन् ।’ एक नेताले भने, ‘हाम्रो सहभागिताले संघियतालाई स्थापित गराउन र संघियताको मर्म अनुसार शाुसन पदति अगाडि बढाउन अहिले सरकार बाध्य छ । केन्द्रीय सरकार अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई एउटा प्रसाशनिक ईकाइको रुममा मात्र भएको जस्तो गर्दछ । यस्को ताजा उदाहरण लोकसेवा आयोगले गरेको कर्मचारी विज्ञापनबाट पनि थाहा हुन्छ । यस्को विरोधपनि सरकारमा नै रहेको पार्टीले प्रतिपक्ष जस्तोगरि गर्नु पर्ने भएकाले दुई दल नै संघियता प्रति उत्तर दाहित्व नभएको देखिन्छ । अहिले सरकार छोड्दा संघियता सस्थागत नहुन सक्छ ।’
ती नेताका अनुसार अर्को पाटो अहिलेको सरकार पुरा बहुमत प्राप्त सरकार हो । सरकार चलाउन समाजवादी पार्टीको मत यो सरकारलाई चाहिदैन । तर यो पार्टी सरकारमा बसेर आपनो संविधान संशोधनको विषयलाई प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन सक्छ । यो सविधानमा धेरै त्रुटि रहेका छन् । कुनै बेला पनि यो सरकारलाई सञ्चालनको निमित्त पनि सविधान संशोधन आवश्यक पर्ने छ ।
उक्त समयमा सबै माग सम्वोधन नभएपनि संविधानको धाना २७४ मात्र संशोधन गर्न सकियो भने ठूलो उपलब्धी हुन जान्छ । त्यसकारणपनि भावनात्मक निर्णय पार्टीका उच्च नेताहरुले नलिने कुरामा म विश्वास छु ।
यथार्थ के त ?
तर उच्च नेतृत्वलाई सरकारमा सहभागिताको औचित्य र पुष्टि गर्न कुनै न कुनै एक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था चै भई सकेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर अब आउदो संसद अधिवेशनमा संशोधनको प्रस्ताव लानलाई समझदारी कायम गर्ने । यो बजेट अधिवेशन पश्चात प्रसस्त गृहकार्य गर्ने स्ट्रोङली लविङ गर्ने । सकरात्मक भुमिका सरकारमा सहभागिता हुने मन्त्री र संसदहरुले देखाएर आपनो एजेण्डालाई प्राप्ती गरी थप संघर्ष गर्न रणनीति यथार्थ हो ।